2 easy methods of using Zig Zag indicator at Olymp Trade - knowledgeworkers
အိမ်ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာOlymp Trade တွင် Zig Zag ညွှန်ပြချက်ကို အသုံးပြုရန် လွယ်ကူသော နည်းလမ်း ၂ ခု
(နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့- ဧပြီလ 21 ရက်၊ 2022)
Zig Zag ညွှန်ပြချက်သည် သင်ရှာတွေ့ပြီး သတ်မှတ်နိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံး ကုန်သွယ်မှုညွှန်ကိန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ Olymp Trade ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း.
Olymp Trade တွင် Zig Zag ညွှန်ကိန်းကို ရှာဖွေပြီး သတ်မှတ်နည်း
ပထမဆုံး သင်လုပ်ရမှာက သင့်အကောင့်ထဲကို ဝင်ပါ။ Olymp Trade အကောင့် သင့်ဇယားကို ဆီမီးခုံတွင် သတ်မှတ်၍ သင်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် ဧရိယာဇယားဖြင့် ဤညွှန်ပြချက်ကို မကြိုးစားပါနှင့်။
ထို့နောက်၊ ညွှန်ပြချက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး စာရင်း၏အောက်ခြေမှ Zig Zag ညွှန်ပြချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
Zig Zag အညွှန်းဆိုတာဘာလဲ။
Zig Zag ညွှန်ပြချက်သည် စျေးနှုန်း၏လက်ရှိရွေ့လျားမှုကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် ကုန်သည်များအသုံးပြုသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤညွှန်ပြချက်သည် စျေးနှုန်းကို ဖဲကြိုးဖြင့်ပတ်ပြီး လုံခြုံရေး၏ မြင့်မားခြင်းနှင့် အနိမ့်ကို ပြသသည်။ ကုန်သည်များက ၎င်းကို Zig Zag ဟုခေါ်ပြီး ၎င်းသည် စျေးနှုန်းကို Zig-Zag နည်းလမ်းဖြင့် ရွေ့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နည်းလမ်း 1- ပံ့ပိုးမှုနှင့် ခုခံမှုကို အသုံးပြု၍ Olymp Trade တွင် Zig Zag ညွှန်ပြချက်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနည်း
Zig Zag သည် လုံခြုံရေး၏အတိတ်ရွေ့လျားမှုကိုရှာဖွေလိုပါက ကြီးစွာသောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ သို့သော်၊ ၎င်းသည် စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းအတွက် ခန့်မှန်းချက်မပေးပါ။
ဤညွှန်ကိန်းကို အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ၎င်းကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။ ပံ့ပိုးမှုနှင့်ခုခံမှု သို့မဟုတ် ကဲ့သို့သော ညွှန်ကိန်းများဖြင့် RSI သို့မဟုတ် Stochastic.
Zig Zag ညွှန်ပြချက်သည် ခုခံမှုအဆင့်ကိုထိသည့်အခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် downtrend ထဲသို့ဝင်ရောက်ဖွယ်ရှိကြောင်းညွှန်ပြသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရွေးချယ်မှုတွင်အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သင့်သည်။
အလားတူ၊ Zig Zag လိုင်းသည် ပံ့ပိုးမှုအဆင့်ကိုထိသည့်အခိုက်အတန့်သည် တိုးတက်မှုရှိလာမည့်လမ်းကြောင်းကို ညွှန်ပြနေသောကြောင့်၊ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Zig Zag ညွှန်ပြချက် RSI နှင့်ပေါင်းစပ်
Zig Zag ညွှန်ပြချက်ကို RSI နှင့် ပံ့ပိုးမှုနှင့် ခုခံမှုတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အား အရည်အသွေးမြင့် အချက်ပြမှုများကို ပေးနိုင်ပါသည်။
Zig Zag သည် ပံ့ပိုးမှုအဆင့်နှင့် RSI လိုင်းအနီးတွင် ရှိနေသောအခါ oversold အဆင့်အနီးတွင် အားကောင်းလာမည့် လမ်းကြောင်းသစ်၏ အချက်ပြမှုဖြစ်သည်။ ဒီတော့ ဒီမှာ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်လို့ရတယ်။
အလားတူ Zig Zag လိုင်းသည် ခုခံမှုအဆင့်နှင့် RSI လိုင်းကို overbought အဆင့်အနီးတွင် ရှိနေသောအခါတွင် ကျဆင်းလာမည့် လမ်းကြောင်းသစ်၏ အချက်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Zig Zag ညွှန်ပြချက်ဖြင့် မှန်ကန်စွာ ကုန်သွယ်မှုပြုနည်းဆိုင်ရာ မှန်ကန်သော အသိပညာကို သင်ရရှိထားပြီး၊ သင်လုပ်သည့် အကောင်းဆုံးအရာမှာ ဤညွှန်ကိန်းကို စမ်းကြည့်ပါ၊ Olymp Trade သရုပ်ပြအကောင့် ဤညွှန်ပြချက်သည် သင့်အတွက် မည်သို့ပြုမူသည်ကို ကြည့်ရှုပါ။
Zig zag စတော့
ယခင်ဆောင်းပါးအရည်အသွေးအချက်ပြမှုများရရှိရန် VFX သတိပေးချက်ကို Olymp Trade နှင့် ပေါင်းစပ်နည်း
နောက်ဆောင်းပါးOlymp Trade တွင် လွယ်ကူသော 1 မိနစ် EMA နှင့် Stochastic နည်းဗျူဟာ
Olymp Trade ဟက်ကာများ1
Parabolic SAR ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။1
Parabolic SAR မဟာဗျူဟာ1